टेक्सास होल्डम रणनीति - UK 2021 ✅
Home » क्यासिनो खेलहरू » टेक्सास होल्डम » टेक्सास होल्डम रणनीति
टेक्सास होल्डममा स्थिति रणनीति
खेल्ने मैदान संकुचित गर्नुहोस्
पोइन्टरहरू जब उठाउँदै
टेक्सास होल्ड’एममा सबै जाँदै छ
कल गर्ने पोइन्टर्स
के भनेको छ?
कसरी अद्भुत गणना गर्ने
अन्य कार्ड खेलहरू जस्तै, तपाईंलाई रणनीतिहरूको परीक्षण गरिएको सेट पनि आवश्यक पर्दछ जुन तपाईं वास्तविक पैसाको लागि खेल्दा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। र रणनीतिहरूको कार्य समूहको साथ आउनको लागि यो उत्तम हो कि तपाई सहभागीहरू, समानता, र टेबल स्थितिको फाइदाहरू बीचको अन्तर्क्रिया बुझ्नुहुन्छ।
जहाँ आज पोकर गेमका बिभिन्न प्रकारहरू उपलब्ध छन्, तपाईं यी खेल प्रकारहरू बीच न्यूनतम भिन्नता पाउनुहुनेछ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि तपाईंले समस्याहरूको ठूलो समझको साथ आउनु आवश्यक छ, र तपाईंले खराब हात र राम्रोसँगको भिन्नता बताउन सक्षम हुनुपर्दछ।
यस खेलको एक उत्तम रणनीतिहरू डिलर लगायत अन्य खेलाडीहरूको बारेमा तपाईंको स्थिति जान्नु हो। पछिल्लो शर्त लगाउने अवसर पाएदेखि नै डिलर सब भन्दा बलियो मानिन्छ। किनभने उहाँ अन्तिममा काम गर्ने हुनुहुन्छ, यसको मतलब यो हो कि उहाँसँग एक सूचित निर्णय गर्न आवश्यक सबै निर्णयहरू छन्।
डिलरको दायाँ खेलाडी जो ‘कट-अफ’ को रूपमा पनि चिनिन्छ अर्को महत्वपूर्ण स्थान हो किनकि उसले डीलरलाई विवादमा राख्न सक्छ र राख्न सक्छ। प्रारम्भिक स्थिति मा अन्य खेलाडीहरु कमजोर स्थिति होल्डिंग मानिन्छ किनभने तिनीहरूसँग कम जानकारीको पहुँच छ। यसैले तिनीहरूले दांव मा सूचित निर्णय गर्न सक्दैन।
त्यहाँ यो साझा सोच छ कि तपाइँ ठूलो खेल्नको लागि धेरै खेलाडीहरूको आवश्यक छ। जबकि यो आंशिक रूपमा सत्य छ, दिमागमा राख्नुहोस् कि तपाईं पनि ठूलो गुमाउनुहुनेछ। लिने उत्तम दृष्टिकोण भनेको क्षेत्रलाई सानो पार्नु हो, केही प्लेयरहरू टेबुलमा छोड्दै र बाटोमा सानो भाँडा संकलन गर्नु हो। यो एक ठूलो जीत मा शर्त भन्दा एक ठूलो जोखिम संग लगातार एक लगातार आधार मा जीत को लागी राम्रो छ।
खेलाडीहरूलाई बाहिर राख्न, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं सुरुको समयमा कट्टर रूपमा रूढिवादी रणनीतिहरू अपनाएर खेल्नुहुनेछ। यो खेलाडीहरूको बानी र निर्णय शैलीहरू अवलोकन गर्न पनि समय हो। तपाईं सजिलै आक्रामक खेल र प्लेयरहरूबाट ठूलो bluffs नोट लिनुहुनेछ।
एक पटक तपाईं उनीहरूको शैलीहरूसँग परिचित हुनुभयो, तब त्यो समय तपाईं तिनीहरूको विरुद्धमा आफ्ना चिप्स प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। हात ध्यानपूर्वक चयन गर्नुपर्नेछ र क्षेत्र र तालिकाको राम्रो पढाइ नदिउन्जेल चुस्त खेल्नु पर्छ।
एक पटक तपाईं पहिले नै टेबल मा विश्वास गर्नुहुन्छ, तब तपाईं आक्रामक रुख अपनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ कुञ्जी तपाईंको शैली फरक छ ताकि तपाईं खेलाडीहरूलाई यो छाप दिन सक्नुहुन्छ कि यो गुनाको समय हो।
यहाँ जब तपाईं उठाउन चाहानुहुन्छ दिमागमा राख्न केही नियम र सुझावहरू छन्:
यदि तपाईं विश्वस्त हुनुहुन्छ कि तपाईंसँग सब भन्दा ठूलो हात छ, उठाउनुहोस् यसले खेलाडीहरूलाई तहमा लगाउनका लागि प्रेरित गर्नुपर्दछ, यसैले क्षेत्र साँघुरो हुन्छ।
यदि तपाइँ हातको बारे निश्चित हुनुहुन्छ र अब उप्रान्त थप आवश्यक छैन भने, उठाउँदा अन्य खेलाडीहरूलाई थप कार्डहरू तान्न र पुशित गर्दछ।
तपाईं ब्लफ वा सेमी-ब्लफको रूपमा पनि उठाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँको हात कमजोर छ, तर तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि तपाइँ बढाइको साथ अन्य खेलाडीहरू भन्दा आउटस्मार्ट गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई गर्न विचार गर्नुहोस्। यो एक जोखिम हो जुन तपाइँलाई एक फाइदा पनि दिन सक्छ। यदि ब्लफ कल गरिएको छ, तपाईं अझै पनि ड्र मा सुधार गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईले टेबुलमा जानकारी लिनका लागि पनि उठाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंले बढाउने निर्णय गर्नुभयो भने, अन्य प्लेयरले उठाउछ, कल गर्दछ, वा फोल्ड गर्दछ। निर्णयले तपाइँको कार्डहरू कती राम्रा छन् तपाइँलाई जानकारी दिन सक्छ।
यो सब भन्दा रमाईलो र साहसिक खेल हो कि तपाईं यसलाई विश्वासको साथ यसलाई गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं सबै भित्र जान सक्नुहुन्छ यदि तपाईं सोच्नुहुन्छ कि तपाईंसँग सब भन्दा राम्रो हात छ, वा तपाईं तालिकालाई ठूलो ब्लफको लागि वातानुकूलित बनाउनुभएको छ, वा तपाईंसँग हराउन केहि पनि छैन।
यदि खेलको सुरूमा तपाईंले कडा खेल्नु भएको छ, भने सबै पछि गए तपाईंको पक्षमा काम गर्न सक्दछ। टेबलमा रहेका अन्य खेलाडीहरूले सोच्न सक्छन् कि तपाई विजयी हात बिना यो सबै जोखिममा पार्नुहुन्न।
यी केहि पोइन्टरहरू र सुझावहरू हुन् जुन तपाईले कल गर्न निर्णय गर्दा दिमागमा राख्न सक्नुहुन्छ:
यदि तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि तपाइँसँग ठूलो हात छ तर यसलाई लुकाउन चाहानुहुन्छ ताकि तपाइँ पछि उठाउन सक्नुहुन्छ, त्यसोभए कल गर्नु नै तपाइँको उत्तम निर्णय हो। यसलाई रिभर्स-ब्लफ पनि मानिन्छ। यद्यपि यो तपाइँको तर्फबाट एक तटस्थ चाल हो, यसले तपाइँलाई खेल जारी राख्नको लागि अझ राम्रो स्थिति र विश्वास दिन सक्छ।
यदि तपाईं तोकिएको डिलर हुनुहुन्छ भने, तपाईं कल प्रयोग गरेर सबै बेटहरू बन्द गर्न सक्नुहुनेछ।
एक कल पनि अत्यधिक सिफारिस गरिएको छ यदि तपाईंलाई लाग्छ कि तपाईंको कार्डले राम्रो गरिरहेको छ र तपाईं खेलमा रहन चाहानुहुन्छ तर घाटा प्रबन्ध गर्नुहोस्।
यदि तपाईं ब्लफ बनाउने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, प्रारम्भिक राउन्डमा कलले तपाईंको मनसाय लुकाउन मद्दत गर्दछ।
यी अनैच्छिक प्रतिक्रिया वा आन्दोलनहरू हुन् जुन प्राय अनियन्त्रित हुन्छन्। सब भन्दा अनुभवी पोकर खेलाडीहरू सजिलैसँग अवलोकन गर्न र अन्य खेलाडीहरूको ‘बताउँदछ’ व्याख्या गर्न सक्ने हुन्। बताउँछ धेरै प्रकारका आउन सक्छन्; अक्सर यी दोहोरिन्छन्।
उदाहरण को लागी, एक खेलाडी दोहोर्याई उसको अनुहार छुन्छ, वा राम्रो र नराम्रो कार्ड मा एक झलक लिन्छ। बताउँदछ भौंको जुम्ल्याहा वा प्लेयरको आवाजमा परिवर्तनलाई पनि संकेत गर्न सक्छ यदि तपाईं ईट्टा र मोर्टार क्यासिनोमा खेल्दै हुनुहुन्छ।
धेरै पेशेवर खेलाडीहरूको लागि चुनौती भनेको पोकर खेलाडीहरूको हात पढ्ने वा पूर्वानुमान गर्ने यो अवलोकनलाई अवलोकन गर्नु हो। यो खेलाडी को हात पढ्न लगभग असम्भव छ, तर तपाईं खेलाडी को प्रतिक्रिया को आधार मा कार्ड को मूल्य को एक झलक पाउन सक्नुहुन्छ।
दिमागमा राख्नुहोस् कि खेलको बखत ‘कथन पढ्ने’ दुईपक्षीय सडक हो। यसको मतलब यो हो कि यदि तपाइँ अन्य खेलाडीहरू पढ्दै हुनुहुन्छ भने, त्यहाँ ठूलो सम्भावना छ कि तिनीहरूले तपाईंलाई पनि पढिरहेका छन्।
केही खेलाडीहरूले प्रायः ‘विपरित रणनीति’ प्रयोग गर्दछन् जसको अर्थ उनीहरूले च्यानल भन्छन् कि उनीहरूको हातहरू कमजोर छन् यद्यपि यसको विपरित पनि कमजोर छ। त्यसोभए यदि तपाईंले याद गर्नुभयो कि एक खेलाडी अचानक आक्रामक हुन्छ र तपाईंलाई डराउने प्रयास गर्दछ, त्यहाँ ठूलो सम्भावना छ कि खेलाडी bluffing छ त्यसैले तपाईं गुनाउनुहुनेछ।
यदि खेलाडी शान्त छ र धेरै सर्न सक्दैन भने, त्यहाँ ठूलो सम्भावना छ कि उसले बलियो हात समातिरहेको छ। दिमागमा राख्नुहोस् कि व्यवहारमा परिवर्तनहरूले तपाईंलाई हातको मूल्य विश्लेषण गर्न मद्दत गर्दछ।
धेरै खेलाडीहरूको लागि, अनुहारको एक भाग ढाक्नलाई सबैभन्दा सामान्य ब्लफ्स मानिन्छ। धेरै खेलाडीहरूले झुठो कुरा गर्न सक्दैनन्, र तिनीहरू मध्ये केहीले आफ्नो हात अनुहारमा राख्छन् जुन एक विचलन वा अलमल्याउने सिर्जना गर्दछ। तपाईं के गर्न सक्नुहुनेछ हात-देखि-अनुहार आन्दोलनहरू अवलोकन गर्नु, र यो ब्यबहारवादबाट बच्न।
सबै पोकर खेलाडीले भनेको छैन, र यी कार्ड उत्साही धेरै पोकर खेल्दा मा बताएको महत्त्व थाहा छ। तर तपाईं प्राय जसो एमेच्योरहरूसँग खेल्नुहुनेछ, त्यसोभए तपाईं सजिलैसँग यी संकेतहरूको फाइदा लिन सक्नुहुन्छ।
के तपाईंलाई थाहा छ कि आज धेरै जसो खेलाडीहरू अनौठो बारे सचेत छैनन्? यो आँखा पट्टिहरु संग एक एक्सप्रेसवे मा ड्राइविंग जस्तै छ। छोटकरीमा, यो त्यस्तो चीज हो जुन तपाईं जहिले पनि टाढा रहनु पर्छ। असमर्थताहरू जान्नको लागि, तपाईंले पहिले बाहिरिएका कार्डहरू सम्बन्धित अज्ञात कार्डहरूको संख्या विचार गर्नु आवश्यक छ।
यदि तपाईं फ्ल्यास पूरा गर्न कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईंले हाल चार उपयुक्त कार्डहरू राख्नु भएको छ भने, तब डेकले 46 46 अज्ञात कार्डहरू देखाउँदछ। उपलब्ध कार्डहरू मध्ये, तपाईं टेबलमा २ पकेट कार्ड र अर्को hold राख्नुहुन्छ। जबसम्म तपाईलाई थाहा छ कि सूटमा १re १ cards कार्डहरू छन्, डेकमा4र9छ, तपाईलाई आवश्यक पर्ने कार्ड ड्राइंगको बिरूद्धमा २ od प्रतिशतमा तपाईको समस्याहरू बढाएर।
अवश्य पनि, अनौंठो अवसरहरू हुनेछन् किनकी अन्य खेलाडीहरूले पनि उनीहरूको कार्डहरू समात्नेछन्, र त्यहाँ तपाईं यी कार्डहरूको मूल्य जाँच गर्न सक्ने कुनै तरिका छैन।
संक्षेप मा, पोकर रणनीति एक आवश्यकता हो जब तपाईं पोकर खेल्न चाहानुहुन्छ। खेलमा विजयी हुने सम्भावना बढाउन, तपाइँले केहि रणनीतिहरू एकीकृत गर्न आवश्यक छ ताकि तपाइँ स्मार्ट चलाउन सक्नुहुनेछ। निश्चित गर्नुहोस् कि अगाडि सोच्नुहोस् र हरेक परिस्थितिको लागि खेलाडीको वृत्ति साथ आउनुहोस्।
पोकर रणनीतिहरू खेलमा महत्वपूर्ण तत्वहरू हुन्।
पोजिशनिंग रणनीति महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले तपाईंलाई अरू खिलाडीहरू विरूद्ध कसरी खडा हुन्छ भनेर बताउँछ।
खेल खेल्नमा अर्को दृष्टिकोण भनेको क्षेत्रलाई साँघुरो बनाउनु हो। यहाँ, तपाइँ खेलको पहिलो चरणको समयमा कडा खेल्नु पर्छ।
त्यहाँ उठाउँदा विचार गर्न केहि नियमहरू छन्। उदाहरण को लागी, तपाई उठाउनु पर्छ यदि तपाईं हात मूल्य को बारे मा विश्वास गर्नुहुन्छ।
बताउने खेलको महत्वपूर्ण घटक हो, र तपाईं ट्र्याक गर्न सक्षम हुनुपर्दछ र यीको फाइदा लिन सक्नुहुन्छ।